जेठ १९, २०७५| प्रकाशित १६:०७
काठमाडौं– जेठ ४, २०७५। छतमा टहलिँदै गोधूलि नियालिरहेका थिए गोगनबहादुर हमाल। ७ बजेतिर साथी अर्जुन भण्डारीले फोन गरेर सुनाए, खुसीको खबर। यो यस्तो खबर थियो जसले उनलाई पुर्‍यायो बाल्यकालीन 'नोस्टाल्जिया'मा।
'मलाई त संसारै जितेँ जस्तो भएको थियो,' नेपाल लाइभको कार्यालयमा गफिँदै गर्दा पटकपटक जुम्लाकै स्मृतिमा पुग्थे हमाल, 'एसएलसीमा प्रथम श्रेणी मात्र होइन, मैले त सिंगो कर्णाली अञ्चलबाटै टप गरेको रहेछु।'
जुम्लाको भैरव माविबाट अक्षर सिकेका उनले त्यही स्कुलबाट एसएलसी दिए। जहाँ उनी कहिल्यै दोस्रो हुनुपरेन। ७२ प्रतिशत ल्याएर अञ्चल टप गर्दा सबैतिरबाट बधाई र शुभकामनाको ओइरो लागिइरह्यो। उनले त्यसबेला पहिलो पटक महसुस गरे– सफलतामा यस्तो पनि हुँदो रहेछ।
प्रवेशिका दिउन्जेल उनले जुम्ला-काठमाडौंबारे धेरै सुने। कति कुरा घरपरिवारमा हुन्थ्यो, कति सरहरुबाट सुन्थे। काठमाडौं जाने रहर उनलाई सानैमा लागेको थियो। तर जुम्ला-काठमाडौंबीचको दुरी छिचोल्न त्यसबेला उनको परिवारको 'अर्थ'ले दिएन। सुनेका मात्रै थिए– काठमाडौं त कत्ति टा…ढा छ।
भन्नेहरु पनि छन्, काठमाडौंकै सिंहदरबार त जुम्लाबाट झन् टाढा छ।
देश संघीयताको अभ्यासमा छ यतिबेला। केन्द्रीकृत सिंहदरबारबाट जुम्लाजस्ता ठाउँ छेलिँदै गइरहेको अवस्थामा गणतान्त्रिक स्लोगन बनेको छ, 'गाउँगाउँमा सिंहदरबार'।
उनै हमाल भरखरै 'सिंहदरबार' छिरेका छन्।
साथीले जेठ ४ गते सुनाएको खुसीको खबर उनले साटिइहाले, 'मैले पहिलो नम्बरमै सहसचिवमा नाम निकालेँ। अबको जिम्मेवारी प्रदेश ७ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा।'
जुम्लाबाट काठमाडौंको यात्रा र यहाँको संघर्षमा उनले धेरै परिवर्तन भोगे। यसै पनि परिवर्तनशील राजधानीले अनेकौं रुप फेरिइरहन्छ। तर हमालले पढेको स्कुल र गाउँमा अझै पनि ठूलो 'चेन्ज' भइसकेको छैन।
उनी पढेको भैरव मावि अहिले उच्च मावि भएको छ। जन्मेको नराकोट गाविस-२ सिन्जा गाउँपालिका-३ मा बदलिएको छ।
फेरिएको लगभग यत्ति हो।
३५ वर्षअघि सामान्य परिवारमा जन्मिएका हमालले २०५६ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरे। स्कुलबाट उनीसहित जम्मा ५ जनाले मात्र पास गरेका थिए। अरुले सेकेन्ड/थर्ड डिभिजन ल्याउँदा उनले भने पूरै कर्णालीभरमा प्रथम भए।
स्कुल पढ्दा पढाइका अलावा अन्य सिर्जनशील कार्यमा उत्तिकै सक्रिय थिए उनी। विज्ञान र प्रविधिप्रति रुचि राख्थे। यसै पनि 'कर्णाली टपर'को हैसियत बनाइसकेका उनी राजधानी जानैपर्ने 'नैतिक बाध्यता'मा परे। घरका अभिभावक र विशेषगरी दाइबाट सहयोग पाएपछि पहिलो पटक काठमाडौं टेके– २०५७ सालमा।
'सुरुमा उत्रिएको ठाउँ गोंगबु बसपार्क रहेछ। गाडी नपाएपछि नरदेवी पुग्न त्यहाँबाट हिँड्दै आयौं,' उनी सम्झिन्छन्, 'अग्लाअग्ला घर देख्दा त सुरुमा उकुसमुकुस जस्तो भयो। हराइन्छ कि भन्ने डरले बुबाको हात छोड्दै छोडिनँ।'
२०५७ देखि ५९ सम्म अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) पढे उनले। यहाँ पनि यी टपरले अरुलाई पहिलो हुनै दिएनन्।
यसैबीच, आइएससी दोस्रो वर्षको रिजल्ट नआउँदै उनलाई रसिया जाने अवसर आइलाग्यो तर आफैले हापिदिए। 'चारवर्षे कोर्सका लगि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत कोटा आएको थियो। त्यसमा मैले नाम पनि निकालेँ,' उनले सुनाए, 'त्यहाँ भाषा सिक्दैमा दुई वर्ष यतिकै बित्थ्यो। त्यही कारण एउटा सुनौलो मौका छोडिदिएँ।'
अस्कल टप गरेका उनी थप उच्च शिक्षाका लागि पुगे, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज। ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ (बिई) का लागि प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीहरु थिए झन्डै ९ हजार। उनको नाम सुरुवाती लहरमै निस्कियो।
मेकानिकल इन्जिनियरिङको चारवर्षे कोर्स उनले २०६४ मा सिध्याए।
बिईमा राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण गरे पनि तत्काल मास्टर्स पढ्न भने पाएनन्। आर्थिक समस्याका कारण जागिर खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। 'किनकि थप पढ्नका लागि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने थियो मैले,' उनी सुनाउँछन्, 'पढाइलाई नै विश्राम दिएर पैसा कमाउनतिर लागेँ।'
काठमाडौंकै इन्जिनियरिङ कलेजमा ३ वर्ष पढाइसकेपछि मात्रै २०६७ मा उनले स्नातकोत्तरको पढाइ सुरु गरे, रिन्युएवल इनर्जी एन्ड इन्जिनियरिङबाट।
मास्टर्स पढ्दै गर्दा सरकारी सेवातिर छिर्ने सोच बनाएका उनले लोकसेवाले खुलाएको जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङका लागि फाराम भरे। नाम निस्कियो एक नम्बरमै।
यसरी २०६७ भदौ निजामती सेवाको प्रवेशबिन्दु बन्यो हमालका लागि।
२०७४ मा उपसचिवका लागि उनले दुईतिर परीक्षा दिए। आन्तरिक र खुलामा। एउटामा सिफारिसमै परे, अर्को वैकल्पिकमा।
हमालको सफलताको ग्राफ निरन्तर उकालो चढिरहेको थियो। सफलताका अथक धावक उनको लक्ष्य थियो, सहसचिव। त्यसैको तयारीमा लागे। उपसचिवमा नाम निकालेको ९ महिनापछि सहसचिवमा पनि सफलता हात पारिछाडे। 'गत माघमा भएको परीक्षामा ५७४ जना सहभागी थियौं,' उनले सुनाए, '३ जनाको कोटा थियो। त्यसभित्र मैले एक नम्बरमा नाम निकालेँ।'
हमालको विचारमा इन्जिनियरिङ पढेकाहरु ठान्छन्– प्रशासनतिरको विषयवस्तु एकदमै हाउगुजी छ। नाम निकाल्नै सकिन्न।
'तर होइन,' उनले नै थप्दै गए, 'परीक्षामा सहभागी नभई हरेस खानु त भएन नि। टेक्निकल कुराहरुको थप ज्ञान हामीसँग हुन्छ, त्यसले थप भरथेग गर्ने हामीलाई नै हो।'
सहसचिवमा नाम निकालेको खबर पाएपछि इन्जिनियरिङ फिल्डका साथीहरु निकै खुसी भएको बताउँछन् उनी। 'हामीले पनि प्रयास गर्दा हुने रहेछ भनेर हौसिएका छन्,' हमालले दाबी गरे, 'प्रशासनिक क्षेत्रको खुला प्रतिस्पर्धामा इन्जिनियरिङबाट एक नम्बरमा नाम निकाल्ने म नै पहिलो हूँला।'
नेपालको 'ब्युरोक्रेसी'माथि सधैं आलोचना भइरहन्छ– राजनीतिकरण हाबी भयो। काम सधैं पुरानै ढर्रामा। हमाल त भन्छन्, 'सिस्टमको त कुरै नगरौं। कतिपय कर्मचारीलाई इमेलसमेत चलाउन आउँदैन।'
प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेक उनलाई चित्त नबुझेको अर्को पाटो हो, कर्मचारी 'रिस्क' लिनै चाहँदैनन्। 'कतिपय ऐन नियमले पनि कर्मचारीलाई खुलेर काम गर्न दिएको छैन। बाँधेको छ,' उनी भन्छन्, 'नयाँ तरिकाले काम गरिदिँदा स्पष्टीकरण सोधिने हो कि भन्ने डर उनीहरुमा छ।'
मुलुकमा विकास र समृद्धिको बहस सुरु हुँदै गर्दा सरकार सहरदेखि शौचालयसम्म 'स्मार्ट' बनाउने योजनामा छ। कतिपय सरकारी कार्यालय 'पेपरलेस' सिस्टमबाट चल्न थालिसकेका छन्। 'कसरी सेवाग्राहीका लागि छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, त्यता लाग्नुपर्छ,' हमालको विज्ञताले भन्छ, 'विकास प्रशासनमा त अनिवार्य टेक्निकल फिल्डका कर्मचारी भित्र्याउन जरुरी छ।'
दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन रहेको सरकारबाट निकै आशावादी छन् हमाल। गलत नियत भएका कर्मचारीहरु पनि अहिले सुधारको पक्षमा देखिएको र सदाचार र आचरण सुधारको संकेत देखिन थालेको उनले बताए।
चेन अफ कमान्ड नभएसम्म ब्युरोक्रेसी सुध्रिन नसक्ने उनको अर्को तर्क छ। 'प्रधानमन्त्री कडा हुने हो भने मन्त्री चूँ बोल्न सक्दैनन्। मन्त्री राम्रो हुने हो भने सचिवले दायाँबायाँ गर्नै पाउँदैन,' भन्छन्, 'सचिवले राम्रो गरे भने कार्यालय प्रमुख आफै लाइनमा आउने हो। यसै पनि सिस्टम बसिहाल्छ।'
नीतिगत भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा अख्तियारले १०/२० हजार लिने कर्मचारीलाई समाउनुको साटो ठूलै ठाउँमा हात हाल्नुपर्ने बताउँछन् उनी।
इन्जिनियिरङ र प्रशासनका अनुभवी उनले सरकारी कामकाजमा भइरहेको ढिलासुस्ती सुधार्न केही सुझाव पनि दिए:
– कार्यालयीय व्यवस्थापन इन्जिनियरिङ रिफर्ममा जानुपर्छ।
– कागजका फाइल थुपारेर पुरानै शैलीमा काम गर्ने समय सकियो, अबको हरेक सेवा प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ।
– सेवा लिन चाहनेका लागि अनलाइन सिस्टममार्फत घरबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
– सामान्य काम सक्न वल्लो कोठा र पल्लो कोठा दगुर्नुपर्ने सकस सेवाग्राहीलाई दिनुहुन्न। एउटै कम्प्युटरबाट चाँडै कसरी काम सकिन्छ, त्यतातिर जानुपर्छ।
– मुहान सफा भए मात्र नदी सफा देखिने हो। तलबाट होइन माथिल्लो तहबाटै सुधारको सुरुवात हुनुपर्छ।
यम राज शाही (सिंजा देवार गाउँ )जुम्ला
खुसीको सिमा छैन ।गर्व लाग्छ। सर को सफलताको कथा बाट । अरु यस्तै व्यक्ति जन्मा ओस एतिहासिक सिंजा ले।।।
Heartily congratulation dear mitra gagan sir, we are proud on your grand success.
Congratulations !!! Best of Luck
Heartily congratulations Gagan sir! Wish you all the best for your remarkable n grand success in further career!
दाइ पुरै आलेख पढे करिब ३ पटक र मन मा एक किसिम को आत्मबल बढेर आयो। म कक्षा ९ देखि तेहि भैरब उ.मा.वि मा पढे र एस.एल.सि नि तेहि बाट दिए अनि हजुरको कुरा र मेहनत अनि तपाई को अध्यन प्रतिको लगनशीलता तेहि सुन्थ्य अनि हजुर इन्जिनियर पढ्नुभको कुरा धर्मलाल दाइले सुनाउनु हुन्थ्यो र भित्र भित्रै म नि पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो र तेहि आभास ले होला पछि इन्जिनियर नै भए सायद भैरब मा.बि को हजुर पछि को इन्जिनियर भैयो होला। तसर्थ आज यो दिन सम्म्मन आउदा दाइका अनुभव र भोगाइ यति अब्बल छन कि जो हामीले आत्मसात गर्न सक्यौं भने साच्चिकै देश अनि कर्णाली को भलाई हुने कुरा मा दुइमत छैन
Dheraee badhee x Gagan Ji lae . I m very proud oneself. Because Mr. Gagan Hamal is my best class friend since Class 8
पक्कै पनि सिंहदरबारले कर्णालीलाइ चिन्दैन । तर यहिँ ठाऊँबाट आज गगन सरले देखाइदिनु भएको छ । अझ राम्रो काम गर्नुहोला । खुसी लाग्यो पढेँर ।
धेरे खुशी लाग्यो गगन दाजु । अझ प्रगति गर्दै जानुहोवोस् । बधाइ छ ।
वैजनाथ प्रजापति, जो 'भगवान्' बनाउँछन् [फोटो फिचर]
ठमेलका रिक्सा चालक भन्छन्– ऋणपान गरेरै मनाउनुपर्छ दसैं
जनप्रतिनिधि धनीरामलाई आर्थिक अभावले रिक्सा चालक बनायाे
आयो दसैं : खाद्य संस्थानले बेच्न थाल्यो च्याङ्ग्रा र खसीबोका [फोटो फिचर]
बाई-बाई काठमाडौं : दसैं मनाउन घर फर्किनेको लर्को [फोटो फिचर]
राहत लिन आएका राउटे भन्छन् : हामीलाई हाताहात पैसा चाहियो, चेक थाहा छैन